लामो समयदेखि बेल्जियममा बस्दै आएका नेपालीद्धय सहदेव गौतम र पदम गुरुङ सिनेमा निर्माणमा पनि होमिएका छन्। नेपालका चलचित्र बितरक नरेन्द्र महर्जनसंगको सह-लगानीमा उनिहरुले बनाउन लागेको सिनोको नाम हो 'फन्को'। यो सिनेमालाई फ्रान्समा बसोबास गर्दै आएका निर्देशक सुवर्ण थापाले निर्देशन गरेका छन्। सन् २०१५ को आरम्भतिर प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रमा सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की आदिको अभिनय छ। यसै सिनेमाको विषयमा निर्माताद्धय गौतम र गुरुङले रेडियो मण्डलासंग कुराकानी गरेका छन्।
बेल्जीयम बसाई कस्तो हुँदैछ?
पदम: गजब छ। आ–आफ्नो ब्यबसायमा संलग्न छौं। राम्रै चलिरहेको छ।
सहदेव: ठिकै छ। राम्रो गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं।
कति समय भयो बेल्जीयम आउनुभएको?
पदम: १९ बर्ष पो लाग्यो त हौ।
सहदेव: मेरो पनि त्यस्तै १५ बर्षजति भयो। नेपालमा बर्षमा २ चोटिजति पुगिन्छ। पानीपँधेरो भनेजस्तै।
के-के ब्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ? कस्तो चल्दैछ?
पदम: मेरो २ वटा रेष्टुरेन्ट छ। एउटा शुसि बार अनि अर्कोचाँहि ल्याटिज्न अमेरिकन रेष्टुँरा।
सहदेव: मेरोचाँहि बेल्जियमका विभिन्न ठाँउहरुमा पसलहरु छ। विशेषगरि बसोबासचाँहि लुभेनमा।
अनि फिल्म निर्माणतर्फ पनि लाग्नुभएको भन्ने सुनियो?
पदम: हो। सहदेवजी, म लगायत केहि साथिहरु मिलेर नेपाली सिनेमा निर्माण गरिरहेका छौं। नामचाँहि यसको 'फन्को'। यसलाई सुवर्ण थापाले निर्देशन गर्नुभएको छ।
सहदेव:यसमा अहिलेका चल्तिका कलाकारहरु सौगात मल्ल, दयाहाङ राई प्रियंका कार्कि आदिले अभिनय गर्नुभएको छ।
कस्तो खालको फिल्म हो? कहाँ पुग्यो निर्माणकार्य?
पदम: यसलाई 'रोड मुभि' भन्दा हुन्छ। अधिकांश दृष्यहरु रोडमै खिचिएका छन्। सस्पेन्समा आधारित मनोरञ्जनात्मक सिनेमा हो। हामीले यो सिनेमाका दृष्यहरु पोखरा, दमौली, खैरेनी लगायत पृथ्वी राजमार्गका बिभिन्न ठाँउहरुमा खिचेका छौं।
सहदेव: सुटिङ सकियो भन्दा हुन्छ। अहिले सम्पादन कार्य चलिरहेको छ। सम्पादनकै क्रममा यसका केहि सिक्वेन्सहरु हेर्दा हामी यो सिनेमालाई लिएर निकै उत्साहित छौं।
फिल्मप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो? आकर्षित हुनु र लगानि गर्नु अलग अलग कुरा हुन्, होईन?
पदम: म नेपाल हुदैदेखि यहि क्षेत्रमा संलग्न थिएँ। साथीसर्कल पनि फिल्मसंगै सम्बिन्धित थिए। यसअघि मैले बेल्जीयममै बसेर 'सपनाको नौलो संसार' भन्ने सिनेमा बनाईसकेको छु। यहि अभिरुचिलाई निरन्तरता दिने क्रममा फन्कोसम्म आईपुगेको हुँ। त्यसमाथि मलाई यसको बिषयले औधि मन छोयो। यसमा कथा भन्ने तरिका पनि रोचक छ।
सहदेव: मेरो पनि अधिकांस साथिहरु यहि क्षेत्रबाट छन्। त्यसैले फिल्मतर्फ आकर्षित हुनु स्वभाविक भैहाल्यो। जहाँसम्म लगानीको कुरा छ, त्यो परिस्थिति हेरेर पनि हुन्छ। हाम्रो राम्रो टिम छ। पदमजी र मसंगै चलचित्र बितरक नरेन्द्र महर्जन पनि यसको लगानीकर्तामध्ये एक हुनुहुन्छ। सुवर्ण थापा आँफैमा निकै खारिएका निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँको अघिल्लो सिनेमा 'सुनगाभा' समिक्षकहरुले रुचाएका चलचित्रमध्येको हो। त्यस्तै उहाँले 'छोरो', 'मलामी' जस्ता सर्टभूमिहरुमा पनि आफ्नो क्षमता देखाईसक्नुभएको छ। एउटा टिमवर्कको काम मानेर मैले यसतर्फ हात हालेको हुँ।
कति लागतमा बन्न लागेको हो 'फन्को'? बिदेशमा प्रदर्शन गर्ने योजना के छ?
पदम: अहिले नेपालमा बनिरहेका सिनेमाहरुको तुलनामा यसको लागत केहि बढि नै छ। केहि काम बाँकि नै छन्। सायद सबै काम सकिंदा ७० लाख छुन्छ होला। निर्माणका क्रममा प्राविधिक पक्षमा सम्झौता नगरिकन हामीले सिनेमा बनाएका छौं, त्यसैले पनि लगानी बढ्न गएको हो। सिनेमा राम्रो बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले कम्प्रोमाईज गरेका छैनौं। दर्शकहरुले त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
सहदेव: अवश्य। हामी आँफै बिदेशमा बसोबास गर्छौं। बिदेशमा बस्ने नेपालीको टेस्टसंग हामी राम्रैसंग परिचित छौं। त्यसैले हामीले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका ठाँउमा पनि ब्यवस्थित प्रदर्शनको योजना बनाएका छौं। हामी यूरोपमा बस्ने भएकोले यसको शुरुवातचाँहि यूरोपबाट नै हुन्छ होला। हामी प्लानिङकै क्रममा छौं।
भनेपछि फन्कोलाई लिएर यूरो– ट्रिपको प्लान बनिसक्यो?
पदम: हजुर, त्यसै भन्नुपर्ला।
कुन– कुन ठाँउलाई बढि टार्गेट गर्नुभएको छ? युरोपमा कुन–कुन ठाँउमा धेरै नेपालीहरु बसोबास गर्छन्?
सहदेव: लगभग मेन सिटिहरु सबै! यूरो टुर भनेपछि बुझ्नु न! बेल्जियम, फ्रान्स, स्विडेन, पोर्चुगल, डेनमार्क, यूके, स्पेन सबै ठाँउका नेपालीहरुका लागि सहज प्रदर्शनको ब्यवस्था मिलाँउदैछौं।
फिल्म निर्माणकार्यको डे टु डे कार्य पनि हेरिराख्नुभएको छ कि! कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ?
पदम: हजुर, नेपालमा नरेन्द्रजी हुनुहुन्छ। हामी लगातार सम्पर्कमा हुन्छौं। टेक्नोलोजीको जमाना छ। स्काईप मिटिङ चल्छ। सहदेवजी भर्खरैमात्र बेल्जियम फर्किनुभएको हो।
सहदेव: म सम्पादन कार्य हेरेर काठ्माण्डौंबाट गत सातामात्र फर्किएको हुँ। बिचमा सुटिङको बेलापनि एक-दुईपटक पुगेको थिएँ। निर्देशक सुवर्ण थापा पनि अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ। टिमले राम्रैसंग फङ्सन गरिरहेको छ।
बिदेशमा बसेर नेपालमा बन्ने सिनेमामा लगानी गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ? या फाईदाजनक छ?
सहदेव: यो हेर्नुस् सिनेमा हेरेर हुन्छ। विषय के हो? निर्देशक को हो? कास्ट कसरी गर्ने? कथा भन्ने तरिका कस्तो छ? सिनेमामा हुने लगानीको जोखिम यिनै कुराहरुमा आधारित हुन्छ। दर्शकको स्वाद फेरि अर्को ठाँउमा छ। लगानी त नेपालमा बसेकाले गरेपनि बिदेशमा बसेकाले गरेपनि एउटै हो जस्तो लाग्छ।
फन्को सिनेमाबाट तपाँईको अपेक्षा के हो?
पदम: मैले अघि पनि भनें यो एउटा कमर्सियल सिनेमा हो। कथा राम्रो छ। निर्देशक गजबका छन्। कलाकारहरुको त झन् कुरै नगरौं। निर्मााणका क्रममा पनि हामीले कम्प्रोमाईज गरेका छैनौं। हरेक निर्माताको र्इच्छा दर्शकलाई एउटा राम्रो सिनेमा दिऊँ भन्ने नै हुन्छ। अब अपेक्षाको कुरा त के भन्ने! मेहनतको र लगानीको कदर होस् भन्ने त हो नि! अझ खास अपेक्षा त दर्शकको अपेक्षालई पुरा गर्न सकौं भन्ने हो।
एनआरएनए सदस्यहरु पनि सिनेमातर्फ आकर्षित हुनुको मतलब बिदेशमा पनि नेपाली सिनेबजार बिस्तारित हुँदैछ भन्ने हो?
पदम: हो, बिदेशमा नेपालीहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छ। नेपालीहरुले आँफु पुगेको ठाँउमा नेपालीपनको खोजी गर्नु, आफ्नो सिनेमा खोज्नु, आफ्नो गीतसंगित खोज्नु भनेको नेपाली उत्पादनको बजार बढ्नु त हो नि! यो राम्रो पनि हो। होईन र!
सहदेव: र, संगसंगै बिदेशमा रहेका नेपालीहरु बिस्तारै व्यवसायमा पनि क्रियाशिल हुँदैछन्। तिनैमध्येको सिनेमा पनि एक हो। यो क्रममा अझ बढ्न सक्छ। बढ्नु पनि पर्छ।